vibrate penis belt (dildo 002 ) – MM Online Shopping
vibrate penis belt (dildo 002 )
Category: Dildo က်ားတုမ်ား
ပြုလုပ်ထားသော material : PVC + PU +ရော်ဘာ
ဒီခါးပတ်သည် အမျိုးသားများအတွက် လိင်တန်ထည့်ရန် အပေါက်ပါရှိပါတယ် ..
.ထောင်မတ်မူပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲရှိသော အမျိုးသားများ၊ role-play နှင့် pegging စတိုင် စမ်းလို့သော အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် .
အပြင်ဘက်မှာ အနည်းငယ် မာသယောင်ရှိပေမယ် အတွင်းဘက်မှာ နူးညံအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ် .ဒါကြောင့် အစစ်အမှန်ကဲသို့ ခံစားရစေပြီး ကျားတုတွင် သွေးကြောပုံစံများပါ ဖန်တီးထားသောကြောင့် ထိတွေ့လှုံဆော်မူကိုလည်း ပိုပြီးမြင့်တက်စေပါတယ်
အပေါ်ကနေ အောက်အထိက ရလက်မအရှည်ရှိပါတယ်
ထိပ်ဖူး လုံးပတ်ပတ်လည်က ၅လက်မပါ .အထဲကို လိင်တန်ထည့်လို့ရတဲ့အပေါက်အရှည်က ၃လက်မဝန်းကျင်ရှိပါတယ်
ဆွဲွဆန့်နိုင်သော နိုင်လွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မိမိ ခါးဆိုဒ်နဲ့အလွယ် တကူညှိနိုင်ပြီး ခါးဆိုဒ်တော်တော်များများ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် . ဒီခါးပတ်ပါအားတုသည် အသုံးပြုသူအများစုအတွက် အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်စေပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူက safe ဖြစ်စေပါတယ် .
AA ဓာတ်ခဲ ၂လုံးထည့်ရပါတယ် ..
remote တွင်ရှိတော့ အဝိုင်းလေးကို လှည့်ပြီး တုန်ခါအား အတိုးအလျှော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ် ဗိုင်ဗရေတာတွေ့လို့ တုန်ခါအား အရမ်းမပြင်းပါ.
တခုချင်​းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံ video ကို ​အောက်​ပါ link ​လေးမှ တဆင်​့ဝင်​​ရောက်​ ကြည်​့ရှုနိုင်​ပါတယ်​ တချို့ဖုန်းတွေ့မှာ video က media error လို့ပေါ်တတ်ပါတယ် ဒါပေမယ် အဲဒီ media errorကိုလက်နဲ့တချက် နှိပ်ကြည့်ပေးပါ ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်
ျပဳလုပ္ထားေသာ material : PVC + PU +ေရာ္ဘာ
ဒီခါးပတ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လိင္တန္ထည့္ရန္ အေပါက္ပါရွိပါတယ္ ..
.ေထာင္မတ္မူပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲရွိေသာ အမ်ုိးသားမ်ား၊ role-play ႏွင့္ pegging စတိုင္ စမ္းလို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္ .
အျပင္ဘက္မွာ အနည္းငယ္ မာသေယာင္ရွိေပမယ္ အတြင္းဘက္မွာ ႏူးညံေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါတယ္ .ဒါေၾကာင့္ အစစ္အမွန္ကဲသို႔ ခံစားရေစၿပီး က်ားတုတြင္ ေသြးေၾကာပုံစံမ်ားပါ ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ထိေတြ႔လွဳံေဆာ္မူကိုလည္း ပိုၿပီးျမင့္တက္ေစပါတယ္
အေပၚကေန ေအာက္အထိက ၇လက္မအရွည္ရွိပါတယ္
ထိပ္ဖူး လံုးပတ္ပတ္လည္က ၅လက္မပါ .အထဲကို လိင္တန္ထည့္လုိ႔ရတဲ့အေပါက္အရွည္က ၃လက္မ၀န္းက်င္ရွိပါတယ္
ဆြဲြဆန္႔ႏုိင္ေသာ ႏိုင္လြန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိ ခါးဆိုဒ္နဲ႔အလြယ္ တကူညွိႏိုင္ၿပီး ခါးဆိုဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳလုိ႔ရပါတယ္ . ဒီခါးပတ္ပါအားတုသည္ အသံုးျပဳသူအမ်ားစုအတြက္ အံ၀င္ခြင့္က်ျဖစ္ေစၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူက safe ျဖစ္ေစပါတယ္ .
AA ဓာတ္ခဲ ၂လံုးထည့္ရပါတယ္ ..
remote တြင္ရွိေတာ့ အ၀ိုင္းေလးကို လွည့္ၿပီး တုန္ခါအား အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမယ္ ဗိုင္ဗေရတာေတြ႔လို႔ တုန္ခါအား အရမ္းမျပင္းပါ.
Be the first to review “vibrate penis belt (dildo 002 )” Cancel reply
Auto Dildo Robot
big size dildo 33cm
Dildo 010 2way(12 inch)
Dildo 024 (Slingshot simulation dildo female masturbation fake penis sucker super long super large adult sm erotic sex supplies)
Dildo 030 ( Myanmar size)